Israeri ndiyo chiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva chaMwari
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Israeri ndiyo chiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva chaMwari
Israeri ndiyo chiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva chaMwari
Mwari anomira kuverenga nguva kana zvaita sei
MuMagwaro tinoona kuti Mwari anoshandisa Israeri sechiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva.
Tinoshandisa nzira yechiringazuva nekuti tinokwanisa kuyera nguva nacho, semuenzaniso panomhanya mumhanyi. Asi tinokwanisawo kumisa chiringazuva ichocho, semuenzaniso paanenge achidzidzira kumhanya ari oga. Nguva panenge “pakamiswa” chiringazuva haiverengwi senguva yaakamhanya.
Paanenge akatarisana neIsraeri senyika, vachimutambira nekumuteerera saMwari wavo, chiringazuva chinenge chichifamba. Asi pavanorega kuteerera nekuramba Mwari, anovaripisa, nekuvaita vapoteri kana kuvaparadzira, kana kuita kuti dzimwe nyika dzivadzvanyirire, chiringazuva chaMwari chinenge chakamira. Mukati menguva idzi, Mwari haaverengi nguva.
Kubva pane izvi tinodzidzawo chidzidzo chakakosha chekuti Mwari anoshanda nenzira dzakasiyana pakati peIsraeri nekereke.
Ngatitsigirei kutaura uku neBhaibheri. Nekuti tinoshanda nenguva, tichataura nezvemutsara wenguva, kana kuti zvidimbu zvenguva, munhorondo yeIsraeri sezvinotsanangurwa neMagwaro.
Kuna 1 Madzimambo 6 tinodzidza kuti zvakatora makore anoda kusvika 490 kubva parwendo rwekubuda muEgipita kusvika pakuvakwa kweTemberi naSoromoni.
1 Madzimambo 6:1 Zvino pagore ramazana mana namakumi masere shure kwekubuda kwavana vaIsraeri panyika yeEgipita, pagore rechina rekubata vushe kwaSoromoni pakati paIsraeri, nomwedzi weZifi, ndiwo mwedzi wechipiri, wakatanga kuvaka imba yaJehova
2 Imba yakavakirwa JEHOVA namambo Soromoni,...
38 …Naizvozvo wakapedza makore manomwe pakuivaka.
1 Madzimambo 7:48 Soromoni wakaita nhumbi dzose dzaive mumba maJEHOVA, dzaiti: Artari yendarama, netafura yendarama paive nezvingwa zvokuratidza.
49 Nemwenje yendarama yakaisvonaka, mishanu kurutivi rworudyi, nemishanu kurutivi rworuboshwe, pamberi papangataura JEHOVA, namaruva, nomwenje, nembato dzendarama
50 Nemikombe nembato dzemwenje, nembiya, nezvirongo, nezvayenga zvomoto zvendarama yakaisvonaka-naka; nezvibato zvemagonhi zvendarama, zvamagonhi eimba yomukati, iyo nzvimbo tsvene-svene nezvamagonhi eimba, iyo temberi.
51 Naizvozvo basa rose rakaitwa namambo Soromoni paimba yaJehova, rakapera. Soromoni akaisawo nhumbi dzakanga dzatsaurirwa Mwari naDavidi baba vake, sirveri, nendarama, nemidziyo, akadziisa padzimba dzokuchengeta fuma dzeimba yaJehova.
Kubva parwendo rwekubva kuEgipita kusvika pakuvakwa kweTemberi paive nemakore 480. vakatora makore 7 vachivaka Temberi. Zvakatorawo imwe nguva yekuita midziyo yemutemberi, temberi isati yapihwa kuna Mwari. Zvinotisvitsa kumakore anoda kusvika 490.
Asi pakuongorora kureba kwenguva iyi, tinosangana nedambudziko. Kana tikatarisa Shoko rakanyorwa muBhaibheri rese, tikasanganisa ruzivo rwese rwatiinarwo, tinoona kuti nguva iyi inoda kusvika kumakore 624 kwete 490!
Ngatisanganisei nguva iyi chidimbu chimwe nechimwe:
Kwakaita makore makumi mana vana veIsraeri vachidzungaira murenje vasati vasvika munyika yechipikirwa.
Numeri 14:33 Vana venyu vachadzungaira savafudzi murenje makore anamakumi mana, vachirohwa nokuda kwokupata kwenyu, kusvika zvitunha zvenyu zvaparadzwa murenje.
Mabasa 13:16 Ipapo Pauro akasimuka akavaninira noruvoko, akati;Varume vaIsraeri nemi munotya Mwari tererai;
17 Mwari wavanhu ava vaIsraeri wakasanangura madzibaba edu; akakudza vanhu ava, vachiri vatorwa munyika yeEgipita, akavabudisa mairi noruvoko rune simba,
18 Akava nomwoyo murefu nemitovo yavo murenje makore anenge makumi mana.
Vakatora makore anoda kusvika makumi mana kuti vazvitorere nyika yavo yechipikirwa nekurwa. Nguva iyi inoperera pakafa mutungamiri wavo Joshua. Mumashure make vakatungamirirwa nevatongi vakasiyana siyana.
Joshua aive ava nemakore anoda kuita makumi matatu panguva yerwendo rweEksodo:
Joshua aive adarika makore makumi maviri panguva iyi, nekuti Mwari paakavaisira makore makumi mana murenje, akati wese ane makore makumi maviri kana adarika aizofa murenje, kunze kwaJoshua naCerebu. Kutsaurwa kwavo kunoreva kuti vose vaive vadarika makore makumi maviri.
Numeri 14:29 Zvitunha zvenyu zvichawira murenje rino, imi mose makaverengwa, nokuwanda kwenyu kwose, vose vanamakore makumi maviri mavanopfuura, vakandinyunyutira,
30 Zvirokwazvo imi hamungapindi munyika yandakakupikirai, ndichiti ndichakugarisaimo, asi Karebi mwanakomana waJefune, naJoshua mwanakomana waNuni.
Kuna Numeri zvakataurwa kuti aive mambo murudzi rwaIfraimu, zvichireva kuti aive akatodarika makore makumi maviri.
Numbers 13:3 … Vose vavo vari varume vaiva vakuru vavana vaIsraeri.
6 Vokurudzi rwaJuda; Karebi mwanakomana waJefune.
8 Vokurudzi rwaEfraimi, Hoshea, mwanakomana waNuni.
16 …Mosesi akatumidza Hoshea mwanakomana waNuni zita rinonzi Joshua.
Sezvakaitwa naJoshua akatungamirira maJuda kupinda munyika yechipikirwa, Jesu Kristu anotitungamirira kupinda “munyika yedu yechipikirwa”. Saka Joshua mufananidzo (mucherechedzo) waJesu Kristu. Zita raJesu rinowanikwawo mumavara ezita raJoshua (Jeshua).
Ruka akataura kuti Jesu aive ava nemakore anenge makumi matatu paakatanga hushumiri hwake. Saka zvichida Joshua aitovewo nemakore makumi matatu paakatungamirira vana vaIsraeri kupinda munyika yechipikirwa.
Ruka 3:23 Zvino iye Jesu wakanga anamakore anenge makumi matatu,...
Joshua anotsanangurwa se “ mujaya”.
Eksodo 33:11... asi muranda wake Joshua, mwanakomana waNuni, mujaya, haazaibva patente.
Numeri 11:28 Ipapo Joshua mwanakomana waNuni, muranda waMosesi, kubva pavujaya ,....
Karebi waive namakore makumi mana panguva iyi.
Joshua 14:7 Ini ndakanga ndasvika makore anamakumi mana pandakatumwa naMosesi muranda waJEHOVA paKadeshi-Barnea kundoshora nyika.
Saka Joshua anokwanisa kuva aive nezera rimwe naKarebi, saka zvinoreva kuti tinodaro tichipotsa zera raJoshua nemakore gumi.
Joshua aive pakati pemakore makumi maviri kusvika kumakumi mana pakatanga rwendo rwemurenje.
Zera rinoenderana neruzivo rwese rwatinarwo makore makumi matatu. Asi tinokwanisa kuva tichipotsa nemakore gumi. Anokwanisa kuva aive nemakore makumi maviri. kana kuti aive nemakore makumi mana. (Tinoti makore makumi matatu, nemukana wemakore 10 kutadza pahuwandu kana pahushoma hwawo).
Mumashure memakore makumi mana murenje, aizova ava kumakore makumi manomwe paakapinda munyika yechipikirwa, achitungamirira vaIsraeri.
Aive nemakore zana negumi paakafa.
Vatongi 2:8 Zvino Joshua mwanakomana waNuni muranda waJEHOVA, akafa, ava namakore anezana negumi.
Izvi zvinotisvitsa pakuti akatungamirira vaIsraeri kwemakore makumi mana pakurwira nyika yechipikirwa. (makore 110 kubvisa 70 zvinotipa makore 40, nemukana wekukanganisa wemakore +10)
Kutungamirirwa nevatongi vakasiyana siyana:
Kumashure kwekufa kwaJoshua, vaIsraeri vakatungamirirwa nevatongi kwemakore anoda kusvika mazana mana nemakumi mashanu.
Mabasa 13:16 Ipapo Pauro akasimuka, akavaninira noruvoko, akati: Varume vaIsraeri, nemi munotya Mwari tererai;
Sauro ari mambo:
Mumashure mevatongi, Israeri yakava namambo wayo wekutanga. Mambo Sauro akatonga kwemakore makumi mana.
21 Pashure vakakumbira mambo: Mwari akavapa Sauro, mwanakomana waKishi murume werudzi rwaBenjamini, makore makumi mana.
Davidi ari mambo:
Mumashure mamambo Sauro, Davidi akatonga ari mambo kwemakore makumi mana nehafu.
2 Samueri 5:3 Naizvozvo vakuru vose vaIsraeri vakauya kunamambo paHebroni; mambo Davidi akaita sungano paHebroni pamberi paJEHOVA, ivo vakazodza Davidi, kuti ave mambo waIsraeri.
4 Davidi wakanga anamakore anamakumi matatu pakutanga kwake kubata vushe, akabata vushe makore anamakumi mana.
5 Akabata vushe paHebroni pavaJuda makore manomwe nemwedzi mitanhatu; akabata vo vushe paJerusarema makore makumi matatu namatatu pavaIsraeri navaJuda vose.
Tarirai kuti sei tichiti makore makumi mana nehafu (makore manomwe nehafu kusanganisa nemakore makumi matatu nematatu) muvhesi 5 zvinotisvitsa pamakore makumi mana muvhesi 4. Izvi zvinotiratidza kuti mazuva aya ose anogona kuva akadarika ne + hafu yegore.
Soromoni akatanga kuvaka temberi mugore rechina rekutonga kwake:
Mumashure maDavidi, Soromoni akava mambo.
1 Madzimambo 1:29 Zvino mambo akapika, akati; naJEHOVA mupenyu iye wakadzikinura vupenyu hwangu panjodzi dzose,
30 Zvirokwazvo sezvandakakupikira naJEHOVA Mwari waIsraeri, ndichiti; Zvirokwazvo Soromoni mwanakomana wako uchanditevera pavushe, uchagara pachigaro changu chovushe panzvimbo yangu; zvirokwazvo ndichazviita nhasi.
Tinowedzera makore matatu kana mana Soromoni asati atanga kubata basa rekuvaka Temberi.
1 Madzimambo 6:1 Zvino pagore ramazana mana namakumi masere shure kwekubuda kwavana vaIsraeri panyika yeEgipita, pagore rechina rekubata vushe kwaSoromoni pakati paIsraeri, nomwedzi weZifi, ndiwo mwedzi wechipiri waakatanga kuvaka imba yaJEHOVA.
Kusanganisa zvidimbu zvenguva:
Iyi ndiyo pfupiso yezvidimbu zvenguva:
Chiitiko Makore Mukana wekukanganisa Mwadhi dzekutarisa muBhaibheri
Kurwira nekukunda kutora nyika yechipikirwa
Mavhesi kuna Eksodo, Numeri, Joshua, nekunaVatongi
Kutonga kwaSauro Makore 40 ±½ yegore Mabasa 13:21
Kutonga kwaDavidi Makore 40½ ±½ yegore 2 Samueri 4:4, 5
Gore raSoromoni rechina
1 Madzimambo 6:1
Kusvika pakupiwa kwetemberi kuna Jehova Makore 10 ±½ yegore 1 Madzimambo 6 & 7
Makore 624 Makore ±13
Tine nguva mbiri dzakasiyana kwazvo muchidimbu chimwechete chenhorondo. Imwe tsvagiridzo inotipa makore 490 (± gore 1 ), imwe tsvagiridzo inotipa makore 624 (± makore 13).
Izvi zvinoita sekuti Bhaibheri rinozvirwisa zvakanyanya!
Tingatsanangure sei musiyano uyu?
Tsananguro inowanikwa kana tikatambira kuti Mwari haaverengi nguva kana Israeri iri muhutiziro, kana kuti ichitongwa nedzimwe nyika, kana kuti vakapararira (sezvairi nhasi uno). Kuti tizvitsigire, tinotarisa nguva dzese muchidimbu chenguva ino apo Israeri inotongwa nedzimwe nyika:
Ichibatwa naChushanrishathaim, mambo weMesopotamia, kwemakore masere:
VaIsraeri vakabatira Baari, Mwari akavarega vachibatira Mesopotamia kwemakore masere, kusvikira Mwari amutsa Othniel kuti avanunure.
Vatongi 3:7 Zvino vana vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paMwari, vakakanganwa JEHOVA Mwari wavo, vakashumira vaBaari namatanda okunamata nawo.
8 Saka kutsamwa kwaJEHOVA kwakamukira vaIsraeri, akavatengesa muruvoko raKushani-rishataimi, mambo weMesopotamia, vana vaIsraeri vakashumira Kushani-rishataimi makore masere.
Vakabatira Egroni mambo waMoabi kwemakore gumi nemasere:
Israeri yakashumira Baari, Mwari akavaita kuti vabatire Mesopotamia kwemakore masere, kusvikira Mwari amutsa Ehu kuti avanunure.
Vatongi 3:12 Zvino vana vaIsraeri vakaita zve zvakaipa pamberi paJEHOVA, JEHOVA akasimbisa Egroni, mambo waMoabi kuti arwe navaIsraeri, nokuti vakanga vaita zvakaipa pamberi paJEHOVA.
14 Vana vaIsraeri vakashumira Egnori, mambo waMoabi makore ane gumi namasere.
Vakava pasi peruvoko rwaJabini weKanani kwemakore makumi maviri:
VaIsraeri yakaita zvakaipa, Mwari akavasiya vachiwira pasi peruvoko rwemutongi weKanani kwemakore makumi maviri, kusvikira Mwari vamutsa Debora naBaraki kuti vavadzikinure.
Vatongi 4:1 Zvino shure kwekufa kwaEhudi vana vaIsraeri vakaita zve zvakaipa pamberi paJEHOVA.
2 JEHOVA akavatengesa muruvoko rwaJabini, mambo weKanani wakanga achibata vushe paHazori; mukuru wehondo yake wakanga ari Sisera, wakanga agere paHarosheti ravaHedeni.
3 Zvino vana vaIsraeri vakachema kuna Jehova, nokuti wakanga anengoro dzamatare dzinamazana mapfumbamwe, akamanikidza vana vaIsraeri kwazvo makore anamakumi maviri.
Vakava pasi peruvoko rwavaMediani kwemakore manomwe:
VaIsraeri vakaita zvakaipa, Mwari akavaisa pasi pavaMediani kwemakore manomwe, kusvikira Mwari asimudza Gidioni kuti avanunure.
Vatongi 6:1 Zvino vana vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJEHOVA, JEHOVA akavaisa mumavoko aMediani makore manomwe.
Vakava pasi peruvoko rwavaFiristia kwemakore gumi nemasere:
VaIsraeri vakava pasi peruvoko rwaBaari nevamwe vaMwari venhema, Mwari akavarega kuti vashungurudzwe navaFirisitia kwemakore gumi namasere, kusvikira Mwari amutsa Jefta kuti avanunure.
Vatongi 10:6 Vana vaIsraeri vakaita zve zvakaipa pamberi paJEHOVA, vakashumira vaBaari navaAshtaroti navamwari vavaSiria, navamwari veSidoni, navaMwari vaMoabi navamwari vavana vaAmoni, navamwari vavaFirisitia; vakarasha JEHOVA vakasamushumira.
7 Ipapo kutsamwa kwaJEHOVA kwakamukira vaIsraeri, akavatengesa mumavoko avaFiristia, nomumavoko avana vaAmoni.
8 Ivo vakanetsa nokumanikidza vana vaIsraeri gore iro; vakamanikidza vana vaIsraeri vose vakanga vagere mhiri kwaJoridani munyika yavaAmori, yaive paGireadi, makore anegumi namasere.
Vakava pasi peruvoko rwavaFiristia kwemakore makumi mana:
VaIsraeri vakaita zvakaipa, Mwari akavarega vachienda pasi peruvoko rwavaFiristia kwemakore makumi mana, kusvikira Mwari amutsa Samsoni kuti avasunungure
Vatongi 13:1 Zvino vana vaIsraeri vakaita zve zvakaipa pamberi paJEHOVA; JEHOVA akavaisa mumavoko avaFiristia makore anamakumi mana.
Vakava pasi peruvoko rwavafiristia kwemakore makumi maviri:
VaIsraeri havana kuteerera Mwari, Mwari akavarega kuti vamanikidzwe navaFirisitia kwemakore makumi maviri, kusvikira Mwari amutsa Samueri kuti avanunure.
1 Samuel 7:2 Kubva pamusi wekusvika kweareka paKiriati-jearimi, yakagara’po nguva refu, nokuti akanga ari makore makumi maviri; imba yose yaIsraeri ikachema kuna JEHOVA.
3 Samueri akataura neimba yose yaIsraeri, akati: Kana muchida kudzokera kuna JEHOVA nomoyo wenyu wose, bvisai vamwari vatorwa neAshtaroti pakati penyu, mugadzirire JEHOVA moyo yenyu, mumushumire iye oga; ipapo Iye uchakusunungurai pamavoko avaFiristia.
Kusanganisa makore aya:
Pano pane pfupiso yenguva dzose apo Israeri yakatongwa nemamwe marudzi:
Chiitiko Makore Mukana wekukanganisa Magwaro ekutarisa muBhaibheri
Midian Makore 7 ±½ yegore Vatongi 6:1
Philistines Makore 18 ±½ yegore Vatongi 10:8
Philistines Makore 20 ±½ yegore 1 Samueri 7:2
Makore 131 Makore ±3½
Kana tikasanganisa zvikamu zvenguva idzi dzose, tobvisa nguva yakararama Israeri iri pasi pemavoko kana kuti pakumanikidzwa nemamwe marudzi, tinosvika pakusara nemakore 490 akanyorwa kuna 1 Madzimambo 6, uyezve mukati menguva dzatakaisa pamukana wekunge tiine pakakanganisika!
Makore 624 (± makore 13) kubvisa makore 131 (± makore 13) tinosara nemakore 490.
Zvinoita sekuti Mwari aimisa nguva pachiringazuva chake apo Israeri yaive isiri panzvimbo yayaifanira kuva iri. Pavaingodzoka panzvimbo yakanaka naMwari zvakare, Mwari aibva aenderera mberi atangazve kufambisa nguva yake.
Tarirai kuti rwendo rwemurenje haruna kuverengwa panguva paive “pakamiswa” nguva, nekuti Mwari aive achiri kushanda neIsraeri murenje; achivaratidza mutemo wake, achivaratidza tabenakeri, nezvimwe. Vaivewo vasiri “pakumanikidzwa” kana pasi pemavoko emamwe marudzi.
Muchidzidzo chino takawana nguva pachiringazuva chaMwari kuti dzakava makore 490. kwaikwanisa kuva nenguva apo chiringazuva chaMwari chaive “chakamira”, asi nguva yese yakapiwa Israeri makore 490.
Kubva pazvidzidzo zvedu zvinoita sekuti iyi inzira inoramba ichidzokororeka apo Mwari anoshanda neIsraeri. Tinoona mumwe mufananidzo wenguva yemakore 490 kuna Danieri Chaputa 9. Nguva iyi kazhinji inodaidzwa kuti masvondo makumi manomwe aDanieri. Muchiitiko ichocho chiringazuva chaMwari chaive “chakamira” kwenguva inokwana kuita makore 2 000 apo maJuda aive akapararira.
Chidzidzo chakakosha kubva pane izvi ndechekuti Mwari anoshanda nevaIsraeri nenzira yakasiyana (rudzi rwemaJuda) neyavanoshanda nevaHedeni. MuMagwaro tinoona kuti Mwari anoshanda neIsraeri nevaJuda “zvakatwasuka” nevaHedeni anoita “chero zvaaita” panguva iyoyo kutaura kwakajairika.
Ngatitarisei imwe mienzaniso:
Mwari akaraira maJuda zvakajeka kwazvo muTestamente Yekare pamusoro pemitambo yakatsanangurwa uye umwe neumwe nemazuva ayo, makamuri etabernakeri, muyero chaiwo, zvavaitenderwa kudya, rinhi uye kupi kwavaizononamata Mwari vari, huwandu hwevanhu, madzitateguru akakwana, nezvimwe zvakadaro.
Mwari paanoshanda nekereke muTestamente Itsva, tinoona kuti hamuna kutaurwa kwakakwana kwemazuva nenguva, hakuna mitambo yakatsanangurwa ikapihwa mazuva akasimbiswa pairi, hamuna temberi kana tabernakeri yakapiwa miyero yakatarwa, hakuna marudzi akaverengwa, hakuna kuverengwa kana madzitateguru, nezvimwe zvakawanda. Zvinogona kukushamisai kunzwa izvi, asi zuva rekisimusi kana Isita , haana kutaurwa muMagwaro semazuva emitambo yemaKristu!
Ruka 21:24 …Jerusarema richatsikwa navaHedeni, kusvikira nguva dzavaHedeni dzazadzika. Hazvina kutaurwa kuti izvi zvichatora nguva yakareba sei.
Vadzidzi vaJesu pavakamubvunza kuti zvichave rini, akavaudza kuti zvaive zvisiri zvavo kuti vazive. ( Vaimubvunza kuti chiringazuva chichange “chakamira” kusvika rini.)
Mabasa 1:6 Zvino ivo vakati vaungana, vakamubvunza vachiti, ishe, modzosera vushe kunavaIsraeri nenguva ino here?
7 Akati kwavari: hazvina-kufanira kuti muzive nguva kana misi …
Munokwanisa kufunga kuti munofanira kupembera chidyo musi weSvondo wega wega. Asi hazvisi muMagwaro. Takangopiwa “chero” nguva dzisina kutsanangura zvakazara dzichinzi “nguva dzose”.
1 Vakorinte 11:26 Nokuti nguva dzose, kana muchidya chingwa ichi, kana kunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe, kusvikira achivuya.
Pauro anotsanangura nguva dzaizouya:
Vaefeso 2:7 Kuti nenguva dzinouya...
Vaefeso 3:5 Zvakanga zvisina kuziviswa vanakomana vavanhu panedzimwe nguva...
Imwe yendima dzinobaya kwazvo inoburitsa kuti Mwari anoshanda sei neIsraeri nekereke inowanikwa kuna Zvakazarurwa. Johane anoudzwa kuti ayere temberi yaMwari (achishandisa miyero chaiyo yechiJuda), kunze kwenzvimbo yaive yakapihwa kuvaHedeni, yaakaudzwa kuti asayere.
Zvakazarurwa 11:1 Zvino ndakapiwa rutsanga rwakaita semudonzvo: zvikanzi; Simuka uyere Temberi yaMwari, neartari, nevanonamata mairi.
2 Asi siya ruvazhe ruri kunze kwetemberi, usaruyera; nokuti rwakapiwa vaHedeni;...
Kuna Zvakazarurwa 7 vanhu 144 000 vakataurwa. Nekuti uhwu huwandu hwakaverengwa, ava vanofanira kuva maJuda!(veJehova’s Witnesses nemamwe masangano vanoti ava vose maKristu. Asi izvi hazvifambirane nenzira inoshandiswa naMwari.)
Kubva pamusiyano uri panzira inoshandiswa naMwari pakushanda neMaJuda (Israeri) nekereke (vaHedeni) zvinobva zvava pachena kuti kereke haizotsive Israeri chero zvidii.
Kana tisingaoni musiyano uyu, hatisi kuzonzwisisa kuti Israeri ndiyo chiringazuva chinomisa kana kufambisa nguva yaMwari. Pasina ruzivo urwu, hatizonzwisisiwo Magwaro uye chiporofita chawo zvakanaka.